खेलकुद प्रशिक्षण कहिलेदेखि सुरु ? – Suchana Hub
खेलकुद प्रशिक्षण कहिलेदेखि सुरु ?
काठमाण्डौ । लकडाउन अन्त्य भए सँगै सरकारले भदौ १ देखि खेलकुदको प्रशिक्षण पनि सुरु गर्न मिल्ने निर्णय गरेको छ । जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण तथा प्रारम्भिक चरणका खेलहरु भदौ १ देखि सञ्चालन गर्न सकिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको हो । यससँगै अब खेलाडीको लागी अभ्यास गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यसका साथै स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायत हेल्थ क्लब समूहमा खेलिने खेलकुद तथा खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतीहरु अर्को सूचनाबाट तोकिएको मितिदेखि सञ्चालनमा आउने सरकारले जनाएको छ । लकडाउनले गर्दा ओलम्पिक छनोटको खेल्ने तयारीमा रहेका विभिन्न खेलका खेलाडीदेखि लिएर फिफा विश्वकप फुटबल छनोट खेल्ने आईसीसी विश्वकप लिग २ सिरिजका खेलाडीहरु सबैलाई असर परेको थियो । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरुलाई बोलाएर प्रशिक्षण गराउने प्रकियाबारे तयारी सुरु गरिसकेको छ । एन्फाले उपत्यका बाहिर रहेका खेलाडीहरुलाई यहि साउन १६ गते भित्र बोलाउने र दुई साता क्वारेन्टिनमा राखेर पिसिआर परिक्षण गराएपछि भदौ १ गती देखि नै प्रशिक्षण सुरु गर्ने गरी तयारी थालेको छ । अक्टोबर–नोभेम्बरमा नेपालमै हुने फिफा विश्वकप छनोटका लागि एन्फाले यसअघि देखि नै प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको भएपनि सरकारबाट स्वीकृति पाएको थिएन ।
Previous १ करोड बढीमा जमैकामा अनुबन्ध भए सन्दीप
Next ब्राइटनमा लालानाको अनुबन्धन